Iifonti zesitayile se baseball | Izidalwa ezikwi-Intanethi
Iifonti zesitayile seBaseball
Las Uhlobo lwebhola ye-baseball luhlobo lochwethezo oluzayo ukuzalisa loo maxesha angathandekiyo avela kwamanye amashumi eminyaka. Ingakumbi kwabo balandeli baseball yaseMelika kunye nezemidlalo, ezinokubandakanya umbhoxo waseMelika.
Luhlobo lo ifonti 'yaseMelika' kakhulu kwaye isebenzisa uhlobo lokuchwetheza ngokuchwetheza kumagophe alo kwezinye iindidi kwaye ikwabonakalisiwe, kwabanye, yile migca ethe tye ineekona ezingama-90. Siza kukubonisa uthotho lohlobo lohlobo okanye uhlobo lwefonti ye-Baseball oza kuyisebenzisa kuzo zonke iintlobo zoyilo, uphawu okanye umsebenzi wewebhu.
1 Zinjani iifonti zebaseball?
2 Iileta eziGqwesileyo zeBaseball zokuKhuphela
2.1 UBrannboll Fet
2.2 Umdlalo wokudlala
2.3 Ipipi Inc
2.5 Ukuhlaziywa kweBosox
2.7 Umgca ophezulu
2.8 NgoLwesihlanu ebusuku
2.9 uMoya iqela
2.10 Cherry kunye ukwanga
3 ISebe leKholeji yeeVintage
3.1 Isikwere seHokjesgeest sigcinwe kwindawo enye
3.2 INickel yeBuffalo
3.3 Iqela leJersey 97
3.4 Isidiliya esihle kakhulu iN8
3.5 I-NCAA yokuThengwa kweeBoilermaker
3.6 Iibhola zezemidlalo
3.7 Iqela leJersey 95
3.10 Ifonti ye-Baseball Macromedia
Zinjani iifonti zebaseball?
Njengoko igama libonisa, iifonti zebaseball zi ngokusekelwe kwezemidlalo yaseMelika yokubetha kwaye ibhola eza ngesantya esiphezulu ukuba ibethwe. Umdlalo waseMelika ekuthi lo typography unxulunyaniswe nemibala eqaqambileyo kunye nee-angles ezivulekileyo zokukhawulezisa ingqalelo yomfundi okanye umbukeli.
NgowaseMelika, inyani yokubona ibaseball okanye uhlobo lwebaseball inokumsa kulaa Cawa emva kwemini esitya izinja zakhe ezishushu kwaye abone inkwenkwezi elandelayo ye-baseball. zivele kupakisho lweesiriyeli zakho ozithandayo. Luhlobo lwefonti ekwaziyo ukutsala abantu abangathandekiyo, ke ukwazi ukuba ungayisebenzisa njani ngokufanelekileyo, kuba ifuna umoya womoya ophindayo naphina apho siya kuwusebenzisa khona, inokutsala uninzi lwezikhokelo.
Oko kukuthi, ukuba sifuna ukuphinda senze iwebhusayithi okanye nakweyiphi na iphakheji loo mavini kunye ne-retro, ezi fonti zebaseball zigqibelele ukuqinisekisa ukuba sinefuthe ngokwaneleyo kwingqondo yabo babona intengiso yethu, ibhlog okanye i-ecommerce.
Uhlobo lokuchwetheza olubonakalayo kwaye ngaphezulu kokunxulumene ne-United States, ke konke oko kuthengiswa kunxulumene nelizwe laseMntla Melika Ungawusebenzisa lo mthombo ongayi kushiya nabani na ongakhathaliyo. Siza kukubonisa eyona fonti ye-baseball okanye ye-baseball ukuze ubabambe kwaye uyisebenzise kwimisebenzi eyahlukeneyo.
Iileta eziGqwesileyo zeBaseball zokuKhuphela
Masenze ngezi fonti ke amerika kunye nembonakalo Ukubonelela ngeendlela ezahlukeneyo ezinezizathu ezahlukeneyo. Ukusuka kweyona ixhaphakileyo yezo jezi zohlobo lwaseMelika ezineefonti ezigqithileyo zabafundi beekholeji ukuya kuthi ga ngaphezulu kweetro ezizokukhuthaza ezinye izizathu. Sizamile ukuba singaphoswa nayiphina into ebalulekileyo kuluhlu lweefonti zebaseball. Nako sisiya.
Le fonti yeyokusetyenziselwa ubuqu, kodwa ayithengisi. Yifonti yaseMelika enesitayile esibiza kakhulu ngokukhawuleza okokugqibela "l" kunye nombhobho wayo eqhuba lonke igama elinikiweyo njengomzekelo.
Ukukhuphela - Ifonti yeBrannboll Fet
Le fonti ungayisebenzisa kakhulu ukusebenzisela urhwebo kunye noluntu, ukhululekile ke. I-PlayBall yifonti ye-unicode enika inkxaso kwiilwimi ezahlukeneyo ezisebenzisa isiLatin kunye nokwahluka kwako. Ifonti efanelekileyo yemidlalo kunye neeholide.
Ukukhuphela - Dlala ifonti yeBhola
Sibuyela kumthombo onokuwusebenzisa ngokwakho. Into enomdla malunga nale typeface ngokungathi ipeyintwe ngeepensile ezinemibala, enika isitayile esikhetheke kakhulu kwaye inokugqibelela ukubhala unobumba iimveliso zokutya.
Ukukhuphela - Iifom zeLandi Inc.
Kwakhona ukusetyenziswa kwakho, IJackport yifonti ekuvumela ukuba uyisebenzise kwiilwimi ezahlukeneyo. Nantsi imigca ethe tye kwaye ezo engile zingqongqo zefonti entle nenesidima enokulungela iinjongo ezahlukeneyo.
Ukukhuphela - Ifonti yeJackport
Ifonti yasimahla ngokupheleleyo gxininisa eso sitayile ngokungathi sivunyiwe kwaye inezinto ezahlukileyo ezahlukileyo kwimida yesakhiwo sokuchwetheza. Ungafikelela kubunzima obahlukeneyo kunye nezitayile ngaphakathi kwale fonti ibizwa ngokuba yiBosox.
Ukukhuphela - Ifonti yeBosox
Umthombo ngaphandle kwamathandabuzo kubaluleke kakhulu Kwaye iphefumlelwe kukuvuna kunye nezo logo zebaseball. Le fonti inezinto ezi-2 ezahlukeneyo: Iskripthi saseBroffont kunye neBrashont yeSwash yeScript Awunakho ukuyisebenzisela urhwebo, kodwa ulisebenzisela wena buqu. Njengabanye abaninzi ngee-euro ezimbalwa ungazisebenzisa ukuziguqula kwiwebhusayithi yakho.
Omnye umthombo wokuzenzela kwaye Iphantse yaphefumlelwa yiNtshona. Sitsho ngemigca ethe ngqo kunye nezo leta zibalulekileyo. Uhlobo lochwethezo olusebenzisa ukufakelwa kokuzaliswa ngaphakathi koonobumba bonke kwaye oko kunika olo phawu lubalulekileyo.
Ukukhuphela - Ifonti yomgca ophezulu
Ezo sweatshi zaseMelika kunye neeleta zasekholejini? Ewe, le fonti ingaphezulu kokugqibeleleyo ukuze ikwazi ukuvelisa olo hlobo lukhethekileyo kunye nolweMelika. Siphantse sahamba umbhoxo ongaphezulu kunebheyiball, ke ukunika iindidi ezahlukeneyo kumxholo othi "Izibane zangoLwesihlanu ebusuku" ngowona mthombo ucetyiswayo. Ukusetyenziswa komntu kuphela.
Khuphela-Umthombo NgoLwesihlanu ebusuku
Ifonti ebonakaliswa ngulo mgca ophela phantse ngathi ilogo ye-nike kwaye oko kuyinika ukubamba okukhethekileyo. Ifonti ye-baseball ekwabonelela ngokwahlukeneyo kwezinye iifonti ezibonisiweyo kolu luhlu. Unayo yonke into ekhululekile ukuba uyonwabele, ke sele ithatha ixesha ukuyifaka kwi-Photoshop kwaye uyifaka.
Ukukhuphela - Ifonti yoMoya weQela
Cherry kunye ukwanga
Kucace gca ngo apho kuqhuma khona kunye nale font baseball, kodwa inokusetyenziswa ngeendlela ezininzi. Vula ii-angles kuyilo kunye nesitayile se-calligraphic. Awungekhe uyisebenzisele ukuthengisa, kodwa uzenzele ngokwakho. Ukuba uyayifuna ukuyisebenzisa nakweyiphi na imveliso, ungayithenga kwiwebhu.
Ukukhuphela - Ifonti yeCherry kunye neKisses
ISebe leKholeji yeeVintage
Omnye umthombo waseyunivesithi kwaye nje enye yezi zingasentla ungazisebenzisela ezo t-shirt zaseMelika zinobungakanani obukhulu kwi-typography. Iyafumaneka ukuze isetyenziselwe wena kuphela. Uhlobo lwebhola ekhatywayo olunika olu ngeniso igama ngokugqibeleleyo, awucingi?
Ukukhuphela - Ifonti yeKholeji
Isikwere seHokjesgeest sigcinwe kwindawo enye
Enye yezinto ezinqabileyo oza kuzibona kolu luhlu, kodwa oko kungangeniswa ngokuthe ngqo njengomthombo we-baseball. Le yeyokusetyenziselwa urhwebo kunye nokuzenzela. Ifonti enemigca emininzi ethe tye kunye Ii-angles ezingama-90. Kucace gca ukuba ikhetheke kangakanani ngenxa yemigca ephuma kwijometri eqhelekileyo ukuyinika eyayo indlela engathandabuzekiyo.
Ukukhuphela - Ifonti yehokjesgeest
Ifonti ebetha kakhulu phantse ukusibuyisela kwamanye amashumi eminyaka kwaye ibonakaliswa ngokuba kukhetheke kuzo zonke izizathu zayo. I-calligraphic kakhulu, ineenkcukacha zayo kunye nemigca ebonakalayo ebonakalayo engashiyi nabani na ongenamdla. Ukusetyenziswa kakuhle kunokubeka icing kwikhekhe umsebenzi wakho unokuba ngumthengi onikiweyo.
Khuphela-Umthombo INickel yeBuffalo
Iqela leJersey 97
Omnye umthombo ongaphezulu eyunivesithi ephawuleka kwezo protrusions embindini woyilo lonobumba ngamnye. I-sans serif varsity slab kwaye kwinguqulelo epheleleyo inabalinganiswa abakhethekileyo baseYurophu abanjenge-accent. Sele uyiqondile ukuba ungayisebenzisa ngokwakho.
Khuphela-Umthombo Iqela leJersey 97
Isidiliya esihle kakhulu iN8
Enye ifonti yemigca ethe tye kwaye leyo Ngokusisiseko iyunivesithi. Iyabonakala loo ndlela yokubonakala yaphukile kwaye yaphukile eyinika indawo ekhethekileyo yokuhlulahlula kolu luhlu lweefonti zohlobo lwe-baseball. Kuya kufuneka uhambe ngebhokisi ukuba ufuna ukuyisebenzisa ngenjongo yokuthengisa. Ewe unayo yonke into oyisebenzisayo kwaye uyenze ngayo le nto uyifunayo.
Ukukhuphela - Iidiliya ezigqibeleleyo zeN8
I-NCAA yokuThengwa kweeBoilermaker
Ifonti enomlinganiswa kwaye inokubonwa ngokugqibeleleyo kwisifinyezo se-NCAA njengoko esitsho. Kukuonobumba abancinci apho unokufumana khona ezo diagonal zenze ukuba yeyiphi eyona nto ibalulekileyo egumbini lochwethezo. Iyafumaneka ukuze isetyenziselwe wena kuphela.
Ukukhuphela - Umthombo we-NCAA Purdue Boilermaker
Lo mthombo ngu kwelona xesha langoku kuluhlu, nangona ingayeki ukubeka ukuba uchukumise i-retro engaphezulu. Ifonti yoonobumba bonke ebonakaliswa ngokuphefumlelwa zijezi zeqela lebhola ekhatywayo kunye nezo yunifomu zekholeji. Ifonti eyahlukileyo elingana ngokugqibeleleyo kolu luhlu lweefonti zohlobo lwe-baseball. Ewe, unayo ukuze uyisebenzisele ukuthengisa kunye nokusetyenziswa buqu.
Khuphela-Umthombo Iibhola zezemidlalo
Iqela leJersey 95
Le fonti ilandela ngokufanayo naleyo yangaphambili kwaye unayo osetyenziselwa intengiso kunye nokusebenziswa buqu. Ikwalandela imigaqo yangaphambili eyayiphefumlelwe ziijezi zaseMelika. Ifonti ngokuxhomekeke kulungiso kunye neenjongo ezahlukeneyo.
Ukukhuphela - Ifonti yeqela leJersey 95
Kwaye ukuba sithetha ngenani elikhulu lohlobo lwebhola ye-baseball, inokuba njalo njani akukho chola ukuba yintoni ibaseball? I-baseball kuphela yileta ekufuneka iphefumlelwe kwaye esivumela ekusebenziseni kwethu ukubonisa ngqo i-baseball. Ayikho enye efana nayo, ngaba kuya kufuneka ujonge uhlobo lwentengiso?
Ukukhuphela - Ifonti ye baseball
Kwaye kuba sikumhlaba wezemidlalo, ii-alphasports ukuqokelela iintlobo ezahlukeneyo zazo kwaye apho i-baseball ingasweleki. Ungayisebenzisa kuzo zombini ezentengiso kunye nokuzisebenzisa. Ke ukuba ufuna umthombo wolu khuphiswano lwasehlotyeni okanye iligi yebhola ekhatywayo yabamelwane, le ilungile kule midlalo.
Ukukhuphela - Isicatshulwa sefonti
Ifonti ye-Baseball Macromedia
Yiyo koovimba bolwazi kuluhlu lonke kwaye sisiseko sabadlali ababini abakulungeleyo ukuphosa ibhola kwaye bayiqokelele enye. Kukodwa okuhlangabezana nomgaqo wayo yonke le mithombo ikwabelwana ngayo nawe kwaye sinethemba lokuhlangabezana neemfuno ezilindelekileyo. Ayizukubumba amagama, kodwa inika umdlalo omninzi, ngokuqinisekileyo uya kuyazi ukuba ungayisebenzisa njani le fonti ibizwa ngokuba yi-Baseball.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » Izibonelelo » Imithombo » Iifonti zesitayile seBaseball
Ndidinga icandelo eliya ezantsi kweleta, kodwa i-marcelle ayiloncedo kuba inemingxunya, iballpark ilungile kodwa ayizisi "swheshes", naluphi na uluvo lokufumana ifonti enjenge-marcelle kodwa ngaphandle kwemingxunya?
Enkosi kakhulu ngale mithombo!
Phendula u hugol
Uxolo, ndingazifaka njani kwi-illustrator okanye kwi-photoshop ???
Imithombo yolwazi ye-baseball
Phendula ku 3471021236
UJavier nemecio hernandez diaz sitsho
iifonti ezilungileyo kakhulu, ndifuna ukubeka isabhokhwe yeleta yokugqibela kunye nefonti yebrannboll kuba ayiphumi, enkosi
Phendula u-javier nemecio hernandez diaz
Xa iilogo ezimbini zinokufana okuninzi njengeCalibra kunye neNgoku
Amagcisa aseJapan acinga amazwe kunye neeflegi zawo njengabalinganiswa be-anime